Kedụ ka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi ga -esi nyere anyị aka ịkwadebe maka ọdịnihu kuki? | Martech Zone
Google kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-egbu oge atụmatụ iwepụ kuki ndị ọzọ na ihe nchọgharị Chrome ruo 2023, otu afọ gafere karịa ka o mere atụmatụ. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọkwa ahụ nwere ike ịdị ka nloghachi azụ n'ọgụ maka nzuzo ndị ahịa, ụlọ ọrụ sara mbara na-aga n'ihu na-aga n'ihu na atụmatụ imebi ojiji nke kuki ndị ọzọ. Apple wepụtara mgbanwe na IDFA (ID maka ndị mgbasa ozi) dị ka akụkụ nke mmelite iOS 14.5 ya, nke chọrọ ngwa ka ọ rịọ ndị ọrụ ka ha nye ya ikike ịnakọta na ịkekọrịta data ha. Kedu ihe ọzọ, Mozilla na Firefox akwụsịla nkwado maka kuki ndị ọzọ iji soro ndị ọrụ na ihe nchọgharị ha. Ka o sina dị, na Chrome na -aza ajụjụ ihe dị ka ọkara nke okporo ụzọ weebụ na US, ọkwa a ka na-egosipụta mgbanwe seismic maka kuki ndị ọzọ.
Nke a niile na-eduga na mgbasa ozi n'ịntanetị ka a na-akwali ka ọ dabara na webụ nke nzuzo, na-enye ndị ọrụ njedebe njikwa data ha nke ọma. Usoro iheomume nke 2022 na -enwe oke agụụ mgbe niile, nke pụtara na ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta anabatala oge a, ebe ọ na -enye ha ohere ka ha were mee mgbanwe. Agbanyeghị, ntụgharị gaa na ụwa kuki agaghị abụ ngbanwe otu oge, mana usoro na-aga n'ihu maka ndị mgbasa ozi amalitelarị.
Iwepụ ntụkwasị obi na kuki
Na mgbasa ozi dijitalụ, ụlọ ọrụ teknụzụ mgbasa ozi na-eji kuki ndị ọzọ eme ihe iji mata ndị ọrụ na desktọpụ na ngwaọrụ mkpanaka maka ebumnuche ezubere na ịkọ akụkọ. Dabere na mgbanwe na mmasị ndị ahịa gbasara ka esi anakọta ma ọ bụ jiri data ha, a ga -amanye ụdịdị ka ha kwụsị ịdabere na kuki, na -atụgharị gaa n'ọdịniihu nke na -emezu ụkpụrụ nzuzo ọhụrụ. Ndị ọchụnta ego nọ na mbara igwe nwere ike iji oge ọhụrụ a dị ka ohere iji dozie ụfọdụ nsogbu dị n'okpuru nke metụtara kuki, dị ka iji nwayọ nwayọ na enweghị ike ịchịkwa data onye mbipụta maka ndị nchịkọta akụkọ, ma ọ bụ kuki dakọtara n'etiti nyiwe dị iche iche maka ndị mgbasa ozi.
Ọzọkwa, ịdabere na kuki emeela ka ọtụtụ ndị na -ere ahịa na -elekwasị anya nke ukwuu na atụmatụ atụmatụ ha, na -ahụ ka ha na -adabere na ụdị njiri mara ha ma nabata ngalaba mgbasa ozi na -akwalite maka ịkwalite mgbasa ozi. Ọtụtụ mgbe, ụfọdụ ụlọ ọrụ na mpaghara ahụ na -echefu na ihe kpatara mgbasa ozi ji dị bụ ịmepụta mmetụta dị mma na onye ọ bụla na -emekọrịta ihe na ika ahụ.
Gịnị bụ Mgbasa Ozi Ederede?
Mgbasa ozi okirikiri na-enyere aka ịchọpụta mkpụrụokwu ndị na-ewu ewu ma na-erute ndị ahịa site na nyocha ọdịnaya nke mmadụ (gụnyere ederede, vidiyo, na onyonyo), ngwakọta ha, na ntinye ha ka ha nwee ike tinye mgbasa ozi dabara ọdịnaya na gburugburu ibe.
Mgbasa mgbasa ozi 101
Ihe gbara okirikiri bụ azịza kacha mma na naanị otu dị na nha
Ọ bụ ezie na ubi nwere mgbidi ga-abụ nhọrọ maka ndị mgbasa ozi ka ha na ndị ahịa ha nwere ike na-eji data nke mbụ, nnukwu ajụjụ bụ ihe ga-eme na webụ mepere emepe na-enweghị kuki. Ụlọ ọrụ ndị dị na mpaghara teknụzụ mgbasa ozi nwere nhọrọ abụọ: dochie kuki maka teknụzụ ọzọ na -enye ha ohere idobe adreesị na weebụ; ma ọ bụ gbanwee gaa na nzuzo-nhọrọ ezubere iche mbụ dị ka mgbasa ozi okirikiri.
Industrylọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ka dị n'oge mmalite nke ịchọpụta ezigbo azịza maka ụwa kuki nke ndị ọzọ na-esote. Nsogbu dị na kuki abụghị teknụzụ ya, mana enweghị nzuzo. Site na nchegbu nzuzo nke ọma gbanyesiri mkpọrọgwụ ike, ọ nweghị teknụzụ na -anaghị akwanyere ndị ọrụ ùgwù ga -enwe mmeri. Ebumnuche nke okirikiri site na iji nhazi Asụsụ Asụsụ (NLP) na ọgụgụ isi ()AI) Algọridim abụghị naanị dị na arụ ọrụ n'ọtụtụ, mana ọ na -egosikwa na ọ dị irè ka ndị na -ege ntị lekwasịrị anya.
Ikike maka akara ịghọta ọdịnaya nke onye ọrụ na-eri n'oge nnyefe mgbasa ozi ga-abụ ihe nchọpụta ọhụrụ ma dị irè maka ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na mmasị ha. Ịtụkwasị uche n'okwu na -ejikọ mkpa na nha, nkenke, na enweghị nkewa nke mgbasa ozi mmemme na -akwado.
Gbaa mbọ hụ na nzuzo ndị ahịa
N'ihe gbasara nzuzo, mgbasa ozi okirikiri na -enye ohere ịzụ ahịa ezubere iche na gburugburu oke mkpa na -enweghị achọ data n'aka ndị ahịa. Ọ na -emetụta onwe ya na onodu na ebumnuche gburugburu mgbasa ozi, ọ bụghị usoro omume nke ndị ọrụ ịntanetị. Ya mere, ọ na -eche na onye ọrụ ahụ dabara na mgbasa ozi ahụ na -adabereghị na omume akụkọ ihe mere eme ha. Site na mmelite oge, ebumnuche ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enweta ume na-akpaghị aka ịgụnye gburugburu ọhụrụ na mkpa maka mgbasa ozi, na-anya nsonaazụ ka mma na ntụgharị.
Uru ọzọ dị mkpa bụ na ọ na -enyere ndị mgbasa ozi aka izipu ndị na -azụ ahịa ozi mgbe ha kacha anabata ozi ika. Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ọrụ na -eme nchọgharị ọdịnaya gbasara otu isiokwu, ọ nwere ike ịpụta mmasị ha ịzụrụ ihe yiri ya. Na mkpokọta, ike maka ụlọ ọrụ teknụzụ mgbasa ozi na -atụkwasị ọnọdụ ahaziri ahazi dị mkpa, ọkachasị mgbe ha na -arụ ọrụ n'ahịa ndị akọwapụtara nke ọma.
Ọdịnihu Mgbasa ozi
Site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ụzọ nke ụwa na-enweghị kuki, ugbu a bụ oge ime mgbanwe na ijide n'aka na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnye ndị ọrụ njedebe njedebe nke nzuzo, njikwa njikwa data ha nke ọma. Dika ebumnuche okirikiri egosila na ọ dị irè site na mmelite na nhazi nkeonwe, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-achọ ya ka ọ bụrụ ihe ọzọ na kuki ndị ọzọ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ emeela nke ọma na oge nkọwapụta nke ọma wee bụrụ nke buru ibu ma baakwa uru n'ihi nke a. Dịka ọmụmaatụ, imepụta ịntanetị, mepụtara ohere zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ njem, yana ndị nabatara mgbanwe ahụ sitere na ụlọ ọrụ mpaghara ma ọ bụ nke mba wee banye azụmaahịa ụwa. Ndị na -emegide mgbanwe ahụ, na etinyeghị ndị ahịa ha ụzọ, ikekwe adịghị adị taa. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi abụghị ihe dị iche na azụmahịa ga -akọwapụta atụmatụ ha azụ. Ndị na -eri ihe na -achọ nzuzo n'otu ụzọ ahụ ha chọrọ ịde akwụkwọ ezumike ha n'ịntanetị - ọ bụrụ na enyere nke a, ohere ọhụrụ ga -apụta maka mmadụ niile.
Gụkwuo gbasara teknụzụ Seedtag AI
Tags: mgbasa oziteknụzụ mgbasa oziaiAmamịghe echichenzuzo nke ndị ahịamgbasa ozi gburugburu ebe obibikukikukikukikuki nke mbụmbụ onyekuki nke mbụọdịnihu nke mgbasa ozinhazi asụsụNlpnzuzo